Instapaper အစားထိုး | Gadget သတင်း
မေလ ၂၅ ရက်တွင်စတင်အာဏာတည်သောဥရောပအထွေထွေဒေတာကာကွယ်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းသစ် (RGPD) သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားအတွက်အဆုံး၏အစကိုမှတ်သားထားသည်။ ဥရောပမှာသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အများစုသည်ကုမ္ပဏီများ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်ကာအချိန်နည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဤစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်တိုက်ကြီးအဟောင်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။
ဆောင်းပါးများကိုနောက်ပိုင်းတွင်အော့ဖ်လိုင်းဖတ်ရန်သိမ်းဆည်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Instapaper သည်ဥရောပတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကိုရပ်တန့်ကြောင်းနောက်ဆုံးကြေငြာခဲ့သည်။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် Instapaper မှအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ.
ဤဆောင်းပါး၌သင်ပြသသောအခြားနည်းလမ်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များမှအသုံးပြုရန်နှင့်မည်သည့်စက်ပစ္စည်း၊ မိုဘိုင်း (သို့) မည်သည့် desktop မှမဆိုသိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ကွန်ပျူတာများအတွက် Instapaper အတွက်အခြားနည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်းလူအများရှာဖွေနေသည်မှာမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေအချက်အလက်များကိုနောင်တွင်ဖတ်ရန်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းကြောင့်မိုဘိုင်း application များကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့အထိတစ်ခုတည်းသောဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား နောက်မှဖတ်ပါ, Instapaper တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့်၏, အခြားကြီးတွေတစ်ခုမှာ Readability လည်းကတည်းက Pocket ဖြစ်ပါတယ် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအမှုဆောင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် Pocket သည်အမှတ်မထင်စျေးကွက်အတွင်းလက်ရှိရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသော application ဖြစ်လာသည်။ Pocket ကို iOS နှင့် Android နှစ်ခုလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းလိုသောအကြောင်းအရာများကိုပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် desktop browser (ဘရောက်ဆာ) အားလုံးတွင် extensions နှင့် extensions နှစ်ခုလုံးတွင် extensions များကိုပေးထားသည်။
အိတ်ဆောင်ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးသိုလှောင်မှုအကန့်အသတ်မရှိ။ အကယ်၍ စာမျက်နှာပျောက်ကွယ်သွားပြီးအခြားလုပ်ဆောင်မှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့ကမ်းလှမ်းသည့်အပေါင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုလိုပါက၊ ဥပမာစာမျက်နှာများပျောက်ကွယ်သွားပြီးအချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်သူတို့၏ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဆောင်းပါးများသိုလှောင်ခြင်းကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့သွားရပါမည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့အများစုဟာတကယ်ကိုအသုံးမပြုကြတဲ့အထူးကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။
Feedly သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့် RSS manager ဖြစ်သည် လျှောက်လွှာမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းလိုသည့်ဆောင်းပါးအားလုံးကိုသိမ်းထားပါ နောက်မှဖတ်ရန်၊ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရန် ... အကယ်၍ သင်သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကိုမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာများအားလုံးအကြောင်းကြားရန်ရွေးချယ်ထားသည့်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် Feedly သည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည့် subscription ကိုအသုံးပြုစရာမလိုဘဲ၎င်းကိုလုံးဝအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။
Feedly - Smart News Reader ဖြစ်သည်အခမဲ့
တရား ၀ င်တွစ်တာအက်ပလီကေးရှင်းသည်ဆောင်းပါးများကိုနောက်မှဖတ်ရန်သို့သင့်သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်မှာတွစ်တာသို့လည်းခွင့်ပြုသည်။ လအနည်းငယ်အကြာရရှိနိုင်သောဤလုပ်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် tweet မှ link များကိုတိုက်ရိုက်သိမ်းပါ ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ရှိလျှင်ဖတ်နိုင်စေရန်သို့မဟုတ်ထိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်တိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည်။
Tweets များကို link များနောက်တွင်ဖတ်ရန်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြသရန်အတွက် tweeet ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင်ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိအထက်သို့ရက်ကိုနှိပ်ပါ။ Add Tweeet to Saved Items ကိုရွေးပါ။ သိမ်းဆည်းထားသောဒြပ်စင်များကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ username နှင့်ကိုနှိပ်ပါ သိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းများကိုရယူပါ။
Instapaper အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွေရဲ့ link တွေအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းဖို့ခွင့်ပြုပေးတဲ့ application / service ကိုအလျင်အမြန်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်။ OneNote ကကျွန်တော်တို့ကိုမတူညီတဲ့ pads တွေဖန်တီးဖို့ခွင့်ပြုတယ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားသည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသိမ်းဆည်းပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သိုလှောင်ချင်သောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့တိုက်ရိုက်ခွဲခြားနိုင်သည့်ဖိုလ်ဒါများဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
OneNote ကို iOS နှင့် Android တွင်အခမဲ့ရနိုင်သည် သတင်းအချက်အလက်ရရန်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသောလျှောက်လွှာမှအကြောင်းအရာများကိုသိမ်းဆည်းရန်တိုးချဲ့ခြင်းကိုပေးထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစျေးကွက်ရှိဘရောက်ဇာအားလုံးအတွက် extension တစ်ခုပေးသည်။ OneNote ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာ Outlook account Hotmail ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားသောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ OneDrive အကောင့်တွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းခံရလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါးများကိုသိမ်းဆည်းရန်၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ Trello ကိုပုံမှန်စည်းရုံးသည်ဆိုပါကဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည် အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှဖတ်ရန်သိုထားပါ။ ပြproblemနာမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လင့်ခ်များကိုသာသိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပြထားသောအကြောင်းအရာများကိုကူးယူရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။
မှတ်ချက်gရာမ Evernote လည်းတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် နောက်မှဖတ်ရန်အကြောင်းအရာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။ ထို့အပြင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများများပြားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသောအချိန်နှင့်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ Evernote ကို iOS ရော Android အတွက်ပါရနိုင်သည်။ ၎င်းသည် operating systems နှင့် desktop browsers နှစ်ခုလုံးအတွက် extension များရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုယင်းကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။
အမှန်တကယ်ဖြစ်သော်လည်းအခမဲ့ Evernote ဗားရှင်းသည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကိုအထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်လွန်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သောလစဉ်ကြေးပေးသွင်းသူကိုငွေရှင်းကောင်တာသို့သွားရန်လိုအပ်သည်။
Evernote- မှတ်ချက် စီစဉ်သူ
အကယ်၍ သင်၏ terminal တွင်သင်များသောအားဖြင့်သိမ်းထားသည့် link အရေအတွက်က သိပ်မမြင့်ပါဘူး သင်ဂူဂဲလ်မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအများစုကိုအသုံးပြုသည်။ ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းသည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်သိမ်းဆည်းမှုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်မှဖတ်ရန်လင့်များသာမကဘဲဓာတ်ပုံများနှင့်အော်ဒီယိုများထည့်ရန်စာရင်းများကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာများကိုအမျိုးအစားခွဲရာတွင်ဂူဂဲလ်သိမ်းဆည်းခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားကွဲပြားသောအရောင်ချိန်ညှိချက်များကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
Google Keep - မှတ်စုများနှင့်စာရင်းများအခမဲ့
ဆောင်းပါးများကိုနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ရန်လိုအပ်ခြင်းသည်အချိန်သိပ်မကြီးပါက Telegram messaging platform ၏ဖြေရှင်းချက်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကြေးနန်းကခွင့်ပြုတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းအရာမဆိုကြင်နာပေးပို့ပါ အဲဒါတွေဟာရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဖိုင်များ၊ လင့်များပင်ဖြစ်ပါစေ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာကိုကွန်ပျူတာသို့လွှဲပြောင်းလိုပါကဖုန်းကိုမလိုဘဲအလွန်လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပို့သောဖိုင်များသည်ချက်တင်အတွင်းသိမ်းဆည်းထားသည် သိမ်းဆည်းထားသောစာများ.
ထိုနည်းတူစွာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဆွေးနွေးလိုသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုပေးပို့ရန်၎င်းကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်စရာမလိုပဲ ဆောင်းပါးများကိုနောင်တွင်ဖတ်ရန်သိမ်းဆည်းရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ သင် Telegram ကိုသုံးသရွေ့ဤဖြေရှင်းချက်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်မဟုတ်ပါက၎င်းကိုသင်လုပ်ရန်မလိုအပ်သောတွန်းအားဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » ဥရောပ၌အလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်တန့်သွားပြီ ဖြစ်၍ Instapaper အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ